‘नगरको ‘फर्स्ट म्यान’ भएकोले जिम्मेवारी बढेको छ’ « News24 : Premium News Channel
‘नगरको ‘फर्स्ट म्यान’ भएकोले जिम्मेवारी बढेको छ’
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको उपप्रमुख (उपमेयर) बनेकी बिमला राई अहिले नगरप्रमुख (मेयर) छन् । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा मेयरका प्रत्यासी नेकपा एमालेका खडेन्द्र राईलाई ३५१ मतले पछि पार्दै विमलाले मेयरमा बाजी मारिन् । मेयरमा निर्वाचित भएकी विमलालाई चुनाव जित्न चानचुने थिएन । तर, यावत् परिस्थितिलाई छिचोल्दै उनी अन्ततः मेयरमा निर्वाचित भइन् ।
त्यतिबेलाको समय सम्झिने हो भने पाँच दलीय गठबन्धन गरेरै जानुपर्ने पार्टी केन्द्रको उर्दी, त्यसमाथि निर्वाचन दैलोनेरै आउँदा पनि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा कस्लाई मेयरको उम्मेदवार बनाउने टुंगो लागेको थिएन । महिला मेयरको हल्ला चलेपनि पूर्ण परिकल्पना गरिएको थिएन । उपमेयर भइसकेकोलाई मेयर बनाउने कि नयाँलाई चान्स दिने ? भन्ने विषयमा पनि केही छलफलै भएको थिएन । विमलाका अनुसार एउटा चट्टानी अडान थियो– हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा जे गरे पनि कांग्रेस एक्लै लड्छ, गठबन्धन गर्दैन ।
वैशाख १२ गते साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने समय थियो । उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने समय छाेटिने क्रममा मेयरको टिकट विमलाले सकसले पाए । ‘महिलालाई पार्टीले टिकट दियो भन्दैमा म पार्टीले हेर्यो भन्दिन,’ विमला भन्छिन्, ‘प्रदेश १ को ४९ नगरपालिकामध्ये २ जना महिलाले मात्र टिकट पाउनु कति दूर्भाग्य रहेछ ।’ महिलाले स्थान नपाउनुचाहिँ के को ‘साइट इफेक्ट’ हो त ? उनी भन्छिन्, ‘गठबन्धनले पनि हुन सक्छ ।’
अन्य क्षेत्रजस्तै राजनीतिमा पनि महिलालाई कमजोर र अवसर दिनबाट बञ्चित गरिने गरेको अवस्थामा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका चलाउने साँचो विमलाले पाएकी छन् । अब उनले २०८४ सम्म नगरलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएकी छन् । पाँच वर्ष उपमेयर बनेर नगर हाँकेकी विमलासँग के के छन् त मेयर बनेपछिका एजेन्डाहरु ? यीनै विषयमा न्यूज २४ सञ्चारकर्मी लोकराज रुम्दालीले मेयर विमला राईसँग कुराकानी गरेका छन् :
तपाईको राजनीतिक जीवनबारे बताइदिनुस् न,
म राजनीतिक परिवारमै जन्मे, हुर्किए । मेरो बुवा पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो । बुवापछि जेठो दाई (देवेन्द्र राई)ले पनि राजनीतिमा रहेर सेवा गर्नुभयो । उहाँ नेपाली कांग्रेसको उपसभापति भएर ‘रिटायर्ड’ हुनुभयो, म जोडिए । विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा होमिए । हामी सात सन्तान । जेठो दाईपछि परिवारमा राजनीतिको बिडो मैले थामे । एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि म ओखलढुंगाको हिमालय पारामेडिकल सोब्रुमा अध्ययन गर्न पुगे । ओखलढुंगाबाट फर्केर खोटाङ आएपछि उच्च तह अध्ययनका लागि दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भए । स्नातक पढ्दै गर्दा क्याम्पस इकाई समितिको कोषाध्यक्ष बने । पछिल्लो समय नेपाल महिला विकास संघको जिल्ला सचिवको रुपमा पनि काम गरे । अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल जिल्लाको संस्थापक अध्यक्ष पनि बने । पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा चुनिए । प्रदेश १ को सदस्य र संसदीय समितिमा पनि संलग्न भइसकेको छु ।
राजनीतिक दलहरु जनताको पीर मर्का सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि आफूआफूबीच प्रतिस्पर्धा गरेर दुनो सोझाउने गरेको अवस्थामा तपाई राजनीतिलाई कसरी हेर्नुुहुन्छ ?
राजनीतिले एउटा निकास दिनुपर्छ । मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने भएकाले विचारसहित राजनीतिको संस्कार बसाल्न जरुरी छ । तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने राजनीतिक शुद्धता बरालिएकै देखिन्छ ।
तपाई नगरपालिकाको उपमेयरपछि अहिले मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कस्तो महशुस गर्नुभएको छ मेयर र उपमेयर हुनुमा ?
पाँच वर्ष उमपेयर भएको अनुभव र अहिले मेयर हुनुमा कुनै फरकपन पाएको छैन । म उपमेयर हुँदा जे मेरो जिम्मेवारी थियो त्यो इमान्दारपूर्वक पूरा गरे । खाली यत्तिमात्र हो नगरको ‘फस्र्ट म्यान’ भएकोले केही जिम्मेवारी बढेको छ। योजना, मोनिटरिङ, न्याय समितिसँग जोडिएका अन्य थुप्रै समितिहरु छन् । र, अब गर्नु नै छ ।
महिलालाई नेपाली समाजमा अझैँ पनि कमजोरको दृष्टिले हेरिन्छ । विभिन्न पार्टीमा पनि महिलाको उपस्थिति हेर्दा त्यो प्रष्टिन्छ नै । तपाईलाई चाहिँ पार्टीले मेयरको उम्मेदवारी कसरी स्वीकार्यो ?
मलाई पार्टीले यत्रो ठूलो जिम्मेवारी किन दियो भन्ने प्रश्न छँदै छैन । पार्टीमा जिम्मेवारी, क्षमता, योगदान नै मूल्यांकन गरेर म आज यहाँसम्म आएको छु । महिलालाई पार्टीले कसरी हेर्छ भन्ने कुरामा मैले मेयर टिकट पाए भन्दै महिलालाई पार्टीले हेर्यो भन्दिन म । किनभने प्रदेश १ मा ४९ वटा नगरपालिकामा २ जनामात्र महिलाले मेयरको टिकट पाउनु भनेको एकदम न्यून हो । महिलाको हकमा कुरा गर्ने हो भने गठबन्धनले महिलाले योग्यता पुगेर पनि दाबी गर्न पाएको देखिएन । भनौँ न पुरुषवाद अर्थात् लैंगिकवाद हावी भयो ।
उपमेयर पनि भएर नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । महिला भएर काम गर्न सकिँदैन रहेछ भन्ने कहिल्यै सोच्नुभयो ?
म महिला हुँ, महिलै भएको कारण हेप्छन् भन्ने कहिल्यै सोचिन । कन्फिडेन्स, पर्फमेन्स दिन सक्दिन भन्ने आज पनि छैन, भोलि पनि छैन । अहिले पनि लाग्दैन महिला मेयर भए, कमजोरी पो छु कि भन्ने । र, सोच्दै सोचेको पनि छैन । म त झन् अब्बल काम गर्ने सोचमा छु ।
उपमेयर भएर जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच वर्षको अवधिमा नगरभित्र के के विकासका कामहरु भए र समस्याहरु के के बाँकी रहे ?
विकास गतिशिल हो र सदावहार अघि बढ्छ नै । अर्काे कुरा, कुनै पनि विकास काम एकैचोटी पूरा हुँदैनन् । यो प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्दै जाने कुरा हो । यसो भन्नुको मतलब ढिला गर्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन, हामी अहिले स्थानीय जनताका आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गर्ने चरणमा छौँ । खासगरी विकास भन्नेवित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा ठूल्ठूलामा भौतिक पूर्वाधारको विकास भन्नेमै ठोकिन्छ । जस्तैः सडक । सडकको सम्बोधन त गर्नु नै छ तर, पहाडमा विकाससँगै वातावरणीय विनास, जैविक प्रकोपलाई पनि त उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हामीसँग बाध्यताहरु छन् । यसकारण यी सबै कुराको लेखाजोखा गरेरै हामी अघि बढिरहेका छौँ । मुख्यतः वैदेशिक रोजगारी दीर्घकालीन निकास होइन यसको विकल्प खोज्नु नै छ ।
निर्वाचित हुनुअघिको समस्या एउटा ज्यूँका त्यूँ नै छ । त्यो समस्या हो पानी । यसको एउटै कारण नगरमा पर्याप्त पानीको मुहान अभाव हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालको सरकार हुँदा तत्कालीन ७ वडा गाविस (हाल नगरपालिकामा गाभिएका छन्) मा दूधकोशी नदीको पानी ‘लिफ्टिङ’ गरेर नगरवासीलाई पानी खुवाउने प्रस्ताव अघि बढेको थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै खानेपानीका लागि बजेट छुटाइदिनुभएको थियो । खानेपानीका लागि बजेट छुटिए पनि विविध कारणवश अझैँ यो योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । अर्कातिर ठेकेदारले पनि समयमै काम सम्पन्न नगरेको कारण पनि केही समस्या आएको छ । तर, खानेपानीको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ भने बाँकी २० प्रतिशत रहेको छ । यसका लागि खानेपानी मन्त्रीका लागि नगरपालिकाले भनिसकेको छ र अब केही समयमै यो योजना सम्पन्न हुँदैछ ।
अबको पाँच वर्षको अवधिमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका अन्य नगरपालिकाभन्दा के फरक भएको देख्न पाइन्छ ?
पहिलो कुरा, अरुको नगरपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाबीच तुलना गर्नै मिल्दैन । भौगोलिक बनावट, जनसंख्या, धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र अन्य नगरपालिकाबीच तुलना गर्न मिल्दैन । हामीसँग भएको सुनकोशी र दुधकोशी नदीको पानीलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने निकट १० वर्षभित्र अर्कै गतिमा अघि बढ्छौँ । म भन्दिन मेरै कार्यकालमा सबै विकास गरेर देखाउँछु तर, यो भन्न सक्छु मैले सुरु गरेको योजना वर्षाै वर्षसम्म प्रभाव रहनेछ । यसकारण अबको १५ वर्षपछि बीचमा यो नगरपालिकाको परिवर्तन बेग्लै हुनेछ र यहाँका बासिन्दाहरुले गर्वका साथ विकासको कुरा भन्न पाउनेछन् ।
खोटाङ भन्नेवित्तिकै हलेसी आइहाल्छ । यहिँ धार्मिक नामबाट हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका बनेको छ । तपाईलाई के लाग्छ नामअनुसारको काम र विकास भएका छन् कि छैनन् ?
मेयरमा निर्वाचित भएपछि पदभार ग्रहण गर्दा नै मैले ५ बुँदाबारे काम गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो त यो नगरपालिका अरुभन्दा फरक छ यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनको खाँचो । योसँगै धार्मिक र पर्यटनको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छु । यी सबै योजना पूरा गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको टोली गठन गरेर अघि बढिनेछ । नगरका कुनै पनि पनि वडालाई पछि राखेर अघि बढ्दिन । युद्धमा जाँदा के के तयारी गर्नुपर्ने सबै तयारी गरेर नगर अघि बढिनेछ । हलेसी सन्दर्भमा अबको केही समयपछि हलेसी मन्दिरमा दैनिक कति दर्शनार्थीले प्रवेश गर्नुहुन्छ भन्नेतर्फ ‘हेड काउन्ट’ मेसिनको प्रोसेमा छु म । मन्दिरबाहिर र भित्र कति जना दर्शनार्थीहरु हुनुहुन्छ भन्ने सबै विवरण रेकर्ड हुनेछ ।
चुनावी घोषणा पत्रलाई एकछिन थाँती राखेर अबको पाँच वर्षको अवधिमा नगरपालिकालाई द्रुत गतिमा हाँक्ने तपाईसँग के के मुख्य एजेन्डाहरु छन् ?
पहिलो प्राथकिता पानी नै हो । दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि र पर्यटनलाई सँगै राखेका छौँ । तेस्रो शिक्षा र स्वास्थ्य । चाैँथोमा स्वरोजगार । त्यसपछि क्रमशः रहेका छन् । स्वास्थ्यतर्फ कुरा गर्नुपर्दा एक महिला वा एकल पुरुष, अपांगता, अभिभावकविहीन बालबालिकाहरुका लागि नगरले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । नगर अस्पताल पनि बन्दैछ ।
अर्कातिर नगरभित्र नियाल्दा विदेशबाट आएको अधिकांश रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमै खर्च भएको छ । विदेश गएर छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाउने अभिभावकको इच्छा छ र यसका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । तर, अब यहिँ वर्षदेखि कम्तिमा पनि ३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको सुरुवात गर्नेछौँ । फेरि यहाँको भाषालाईचाहिँ शिक्षामा समावेश नगर्ने भन्ने होइन । चाम्लिङ भाषाबाट यहाँ पठनपाठन सुरु भइसकेको छ र यो निरन्तर अघि बढिरहनेछ । अर्काे कुरा म आफू पनि तिलुङ भएको मेरो भाषालाई प्राथमिकता दिएको हैन । कसुन्डा र बरामुजस्तै लोपोन्मुख हुँदै गएको तिलुङ भाषालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ । साथै, नगरभित्रका जुनसुकै भाषालाई पठनपाठनका रुपमा अघि बढाइनेछ । यसरी सबै भाषाभाषीबाट पठनपाठन सुरु हुनु राष्ट्रको गौरव हो ।
नगरभित्रका वडामा विभिन्न पार्टीबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरु छन् । काम गर्न कति सजिलो होला ?
म आफैँ पनि पार्टीबाट मेयर भएको हो नि । मेयर भए भन्दैमा एक्लौटी गतिविधि गर्न मिल्ला ? यो बुझ्न जरुरी छ । बहुमत हुँदा हुँदै पनि म कुनै स्वार्थलाई अघि बढेर हिँड्दिन । जनताबाट निर्वाचित भएपछि हामी सबै दलका नेता होइन जनताको सेवक हुँ भन्ने सम्झिन जरुरी छ ।
कुनै पनि योजना सफल पार्न दक्ष कर्मचारीबिना अधुरै नै हुन्छ । अबको पाँच वर्षको अवधिमा कर्मचारीसँग कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ ?
यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो । यो पाँच वर्षअघि पनि भोगेर आएको छु । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबसेको, परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा त्यो अवधिमा सोचेजस्तो काम गर्न पाएनौँ । अब, अहिले के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीसँग जति कर्मचारी छन् उहाँलाई दण्ड होइन मोटिभेट गरेर काम गर्नेछौँ । हामी कोही पनि हाकिम र पियन हुने छैनौँ । दर्जाभन्दा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेर अघि बढिनेछ ।
प्रसंग बदलौँ, वैशाख ३० को स्थानीय चुनावमा केन्द्रबाट पाँच दलीय गठबन्धन गरेर चुनावमा जान निर्देशन थियो तर, तपाईहरुले गठबन्धन नगरि चुनावमा होमिनुभयो, जित्नु पनि भयो, केन्द्रको निर्देशन त मान्नुभएन नि ?
हामी नमानेको होइन । नेपाली कांग्रेस ४ वटा स्थानीय तहमा आफू एक्लै लड्छ र बाँकी स्थानीय तहमा सहकार्य गर्छ भनेर छलफल भएको हो । र, एक्लै लड्नेमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका हो । पाँच दलबीच त्यस्तो खालको जेन्टल सम्झौँता थियो कि सक्दा आफू लड्ने, नसक्दा गठबन्धन गर्ने । यसबीचमा गठबन्धनकै केही दल बेइमानी गरेर एमालेसँग मिल्नुभयो तैपनि चुनाव मैले जिते ।
कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र नै बनेको देखियो । यसबाट हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका कति अछुतो रहला ?
हो यसमा ढाट्नुपर्ने कुरै छैन । यो नगरपालिका पनि कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्रबाट हिजो अछुतो थिएन । तर, अब त्यस्तो हुँदैन । एक्सन अघि बढ्छ । रोजगारी भन्नेवित्तिकै तलबी कुरालाई मात्र लिइयो, यहिँ गलत छ । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक हेर्ने हो भने न्यूनतम १५ हजार छ तर, मान्छे ४ हजार तलबमै काम गर्न बाध्य छ । हो यहिँ समस्या चिर्न चाहन्छु म । तलबमा मात्र भर पर्ने यो परम्परा अन्त्य गरेर १५ हजार कमाउने क्षमता बनाउन चाहन्छु ।
अन्त्यमा जाँदाजाँदै केही भन्नुहुन्छ ?
मेरै एउटै मात्र भन्नु छ– विकास निर्माणका सन्दर्भमा कोही छुट्ने छैन । सबै एकजुट भई साझा हिसाबले नगरपालिकाको विकासमा होमिनेछाैँ।